Ikhalenda yamaLunar yezinwele zezinwele zikaNovemba 2015: izinsuku ezinhle, ezingathathi hlangothi nezingaphumelelanga.
Kunini lapho kungcono ukuthola izinwele ngoNovemba? Amabhodi wekhalenda yenyanga.
Kuwo wonke owesifazane, ukuya kumuntu wezinwele kuyindaba ebaluleke kakhulu. Kubalulekile hhayi ukuthola kuphela inkosi enhle, kodwa futhi ukukhetha usuku lokuya e-salon, ukuze izinwele emva kwezinqubo zesikhathi eside zihlale ziphilile futhi zikhazimule, futhi izinwele zigcinwe ngendlela yazo. Abanye, ngokuphambene nalokho, bakhetha ukukhetha izinsuku ezinomthelela omuhle ekukhuleni kwezinwele, ngakho-ke ama-curls akhula ngokushesha. Uma ungazi ukuthi uzokwenzela nini izinwele ngoNovemba, ikhalenda yethu yenyanga izokunikeza izinkomba ezidingekayo.
Izintandokazi izinsuku zokubheka izinwele kanye nombala
I-first and second of the month ingaba usuku oluphumelele kakhulu kohambo oluya kumuntu ozinwele. Uma udinga ukusika izinwele zakho bese udayeza izinwele zakho, bese uhlela ukuvakashela salon ekuqaleni koNovemba. Kodwa khumbula ukuthi ukuze umswakama namhlanje awuhambisani kahle. Izinqubo zokunakekelwa kwezinwele zekhaya zingaphinda ziphumelele kakhulu.
Owesishiyagalombili kaNovemba ufanelekile zonke izinqubo zokugqoka izinwele, kuhlanganise nokuqondisa noma ukweluleka kwekhalenda.
Usuku olulandelayo oluphumelelayo lwekhanda likaNovemba lufika ngomhla ka-14. Kodwa kufanelekile kuphela ukulungiswa okulula kokuma kwe-hairdo noma imaski ehlukahlukene eqinisa. Kodwa kusukela ekugqeni nasekudwebeni kungcono ukuyeka.
NgoNovemba 15 no-16, ngokwezikhalenda zenyanga, yisikhathi esihle sokusika izinwele, kodwa hhayi okuhle kakhulu kumbala.
Umkhankaso wenkosi yezinsuku ezingu-17 ungaphumelela kakhulu kuzo zonke izinzwa. Umbala omusha wezinwele uzohlala isikhathi eside, umvuthwandaba uzoletha umphumela oyifunayo, futhi izinwele zizogcina umumo isikhathi eside. Kunconywa ukuba kwenziwe izinqubo zokuqinisa izinwele. Kodwa ngosuku olulandelayo, ngoNovemba 18, akunconywa ukuhlola umbala wezinwele, njengoba kungase kungabi namandla ngokwanele.
Ngokwezikhalenda zenyanga, ngoNovemba kunconywa ukunciphisa izinwele ezingu-23. Kodwa uma unquma ukushintsha umbala wezinwele, kungcono ukukhetha umbala wakho, ngoba umdwebo owodwa wombala kungenzeka ukuthi awuphumelele kakhulu.
Futhi usuku oluhle lokugcina lufika ekupheleni kwenyanga, ngo-30. Futhi nakuba ukukhanda izinwele nokudweba kwezingqimba kuzoba yimpumelelo kakhulu, akunconywa ukwenza imvume.
Izinsuku ezingaphumelelanga nokungathathi hlangothi
Kanye nezikhathi ezihle, kunezinsuku ekhalendeni yenyanga, lapho ochwepheshe benganconywa khona ukwenza izinqubo ze-salon. Zizokwehluleka, noma ngeke zilethe isimiso esimisweni (ezinsukwini ezingathathi hlangothi). Nasi uhlu lwalezi zinsuku, ukuze abesifazane abahle bazi ukuthi umphumela ufanelwe ukulinda ngokuvakashela inkosi.
Izinsuku ezingathathi hlangothi
Kusukela ngo-6 kuya ku-8 kuNovemba okubandakanya kubhekwa ukuthi akusebenzi ngokukhethekile ukukhanda izinwele nokudayida, kodwa i-curl ayivunyelwe
19-21 inombolo ayifanele ukuhlolwa okuyisimanga, ngoba ngeke ubone noma yikuphi ushintsho lwezikhalo ekubukeni kwakho. Kungcono ukumise ukunciphisa ubude noma ukushintsha umbala ukuze uqinise imaski, ukusikhipha ikhanda noma ukucubungula.
Kusukela mhla zingama-24 kuya ku-29 Novemba, ukunqunywa kwezinwele okungapheleli kakhulu ngoNovemba. Yiqiniso, ungakwazi ukunciphisa kancane izingxenyana noma ukunciphisa ukuphela kwezinwele, kodwa izinguquko ezinkulu zingcono ukuhamba.
NgoNovemba 3 no-4, kungcono ukuvumela izinwele ziphumule futhi ziphefumule, ngakho-ke ungangeni ekuvezeni okunamandla kule salon
Kusukela ngo-9 ukuya ku-13 inombolo ayibi kakhulu. Zama ukuthi ungadayiwe futhi ungabonisi, ngoba izinwele ngeke zigcine ukuma, futhi umbala uzosula ngokushesha
Izincomo ezifanayo zisebenza ngoNovemba 22, lapho ikhalenda yenyanga ingabandakanyi ukuphatha izinwele.
Mhlawumbe kusekhalendeni yenyanga ukuthi imfihlo yabesifazane abathile ifihliwe, engakwazi ukuziqhayisa ngaso sonke isikhathi ngesimo sezinwele esifanele kanye nesimo esihle sezinwele. Uma unesikhathi futhi ungakhetha ngokukhululekile usuku lohambo oluya kubasizi bezinwele, kungcono ukulalela lezi zincomo.
Izinsuku ezijabulisayo zomshado we-2016: faka izibopho ngesibusiso somhlaba wonke!
Yisiphi isikhwama esilandelayo ngokwesibonakaliso se-Zodiac?
Ubuhle be-Laconic: iqoqo le-Volta luminaires
Vumela ukuhlunga - umsizi onokwethenjelwa ekulwa nes cellulite
UJese - amaphilisi okulawula ukubeletha ane-antiandrogenic effect
I-minimalism enokwethenjelwa: i-lipstick Ecstasy Lacquer Armani
Ukuhlobisa indlu ngokudweba amahle
Ama-pancake we-Honey ane-apula "eyinhloko"
Ukwelashwa kwezifo zokukhathazeka jikelele
Yikuphi ukudla okungenakudliwa ebusuku?
Anise amafutha abalulekile kanye nokusetshenziswa kwawo
Izifo zokwelapha nokuphendula kwabantu
I-Grapefruit: iyingozi noma iyasiza?
Iphrojekthi yokwakha yekhishi elincane
"I-New Wave 2016": izikhathi eziqhakazile zosuku lokuqala, izithombe namavidiyo